အိုးပိုင်အိမ် နေစရာအခန်းမရှိသူများ သိကြားမင်းကိုယ်တိုင် ဖန်ဆင်းပေးရတဲ့အထိ အစွမ်းထက်တဲ့ ဂါထာတော်ကြီး – Zartiman
Zar Ti Man | July 26, 2020 | Knowledge | No Comments
ယခုဖော်ပြပေးမယ့် မဟာဂုဏ်တော်၂ပါးကိုအမြဲအာစိန္နကံအဖြစ်နေ့စဉ် ပုတီးစိပ် ပူဇော်သွားပါက ပစ္စု ပ္ပန် တင် မကသံသရာပါ ဖြစ်ရာဘဝ နေစရာအိမ်ဘုံဗိမာန်များ အတွက် ပူစရာမလိုတော့ပဲ သိကြားဖန်ဆင်းသော အိမ်ကိုပင် နေရသော ဇောတိကသူဌေးကဲ့သို့ဘုန်းတန်ခိုး ကြီး မားပါလိမ့်မည်။အိမ်မရှိသူများ သိကြားမင်းကိုယ်တိုင် ဖန်ဆင်းပေးရတဲ့အထိ အစွမ်းထက်ဂါထာတော်ကြီးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အိမ်မရှိလျှင်ဇိမ်မရှိနိုင်ပါ….ကိုယ်ပိုင်အိမ် အရိပ်မရှိကြသေးသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်…နံနက်စောစောထပါ…. ။ပျင်းရိခြင်း မောဟကိုပယ်ပါ။သရဏဂုံ၃ပါးဆောက်တည်ငါးပါးသီလခံယူပါ…အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ပါ…ဖြစ်နိုင်ရင် ကျနော်အခုတင်ပေးထားသည့် အိမ်တော်ရာစေတီပုံတော်ကိုဝယ်ကြပါ။
မန်းတလေးအိမ်တော်ရာစေတီရန်ကုန်အိမ်တော်ရာ စေတီ ကြိုက်ရာ စေတီပုံတော်ကိုဝယ်ယူထားပါ။ အိမ်ပြင်ဆောက်ရန် အတွက်အခက် အခဲဖြစ်နေကြသူများ အိမ်ဆောက်လက်စ ဆက်မဆောက်နိုင်ကြသူများ အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ကြည့်ပါ။ကိုယ်တိုင်သိရပါလိမ့်မယ်…လူတိုင်းကိုယ်ပိုင် အိမ်နဲ့ နေချင်ကြစမြဲပါ မကြာခင် သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်းမှာ အကျယ် ပါလာပါလိမ့်မယ်။
စာမူတွေ ရောက်သွားပါပြီ။မိမိသည်အဓိဋ္ဌာန်ဆောက်တည်ပါ…ပုတီး ၂ပတ် အနည်းဆုံးစိပ်ပါ…၉ပတ်စိပ်လျှင်ပိုကောင်းပါသည်။သစ္စာပြု ဆုတောင်းပါကိုယ်ပိုင် အိမ်အရိပ် ရရှိရပါလို၏လို့။ပုတီစိပ်ရန် ဂုဏ်တော်ကားဗောဓိ ဗုဒ္ဓေါ မဟာဃရော။ပုတီးတစ်လုံးဗောဓိ ဗုဒ္ဓေါ မဟာ ဆာယော။ ပုတီးတစ်လုံးအနက်မြန်မာပြန်ဗောဓိသစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်တော်မူသောဗုဒ္ဓေါ မြတ်စွာဘုရားသည် မဟာဃရော သတ္တဝါတို့၏ ခိုနားရာ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်သော အိမ်ကြီးသဖွယ်နှင့် လည်းတူတော်မူပါပေ၏။
ဗောဓိသစ္စာလေးပါးကို သိမြင်တော်မူသော ဗုဒ္ဓေါ မြတ်စွာဘုရားသည် မဟာဆာယော သတ္တဝါတို့၏ ခိုနားရာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော အ ရိပ်ကြီး သဖွယ်နှင့်လည်းတူတော်မူပါပေ၏အားလုံးကိုယ်ပိုင်အိမ် အရိပ်ရရှိကြပါစေ။
ယခုဖျောပွပေးမယျ့ မဟာဂုဏျတျော၂ပါးကိုအမွဲအာစိန်နကံအဖွဈနစေ့ဉျ ပုတီးစိပျ ပူဇျောသှားပါက ပစ်စု ပ်ပနျ တငျ မကသံသရာပါ ဖွဈရာဘဝ နစေရာအိမျဘုံဗိမာနျမြား အတှကျ ပူစရာမလိုတော့ပဲ သိကွားဖနျဆငျးသော အိမျကိုပငျ နရေသော ဇောတိကသူဌေးကဲ့သို့ဘုနျးတနျခိုး ကွီး မားပါလိမျ့မညျ။အိမျမရှိသူမြား သိကွားမငျးကိုယျတိုငျ ဖနျဆငျးပေးရတဲ့အထိ အစှမျးထကျဂါထာတျောကွီးကို မြှဝလေိုကျပါတယျ။
အိမျမရှိလြှငျဇိမျမရှိနိုငျပါ….ကိုယျပိုငျအိမျ အရိပျမရှိကွသေးသူမြားအတှကျရညျရှယျပွီးတငျပေးခွငျးဖွဈပါတယျ…နံနကျစောစောထပါ…. ။ပငျြးရိခွငျး မောဟကိုပယျပါ။သရဏဂုံ၃ပါးဆောကျတညျငါးပါးသီလခံယူပါ…အဓိဋ်ဌာနျဝငျပါ…ဖွဈနိုငျရငျ ကနြျောအခုတငျပေးထားသညျ့ အိမျတျောရာစတေီပုံတျောကိုဝယျကွပါ။
မနျးတလေးအိမျတျောရာစတေီရနျကုနျအိမျတျောရာ စတေီ ကွိုကျရာ စတေီပုံတျောကိုဝယျယူထားပါ။ အိမျပွငျဆောကျရနျ အတှကျအခကျ အခဲဖွဈနကွေသူမြား အိမျဆောကျလကျစ ဆကျမဆောကျနိုငျကွသူမြား အဓိဋ်ဌာနျဝငျကွညျ့ပါ။ကိုယျတိုငျသိရပါလိမျ့မယျ…လူတိုငျးကိုယျပိုငျ အိမျနဲ့ နခေငျြကွစမွဲပါ မကွာခငျ သူရဇ်ဇမဂ်ဂဇငျးမှာ အကယျြ ပါလာပါလိမျ့မယျ။
စာမူတှေ ရောကျသှားပါပွီ။မိမိသညျအဓိဋ်ဌာနျဆောကျတညျပါ…ပုတီး ၂ပတျ အနညျးဆုံးစိပျပါ…၉ပတျစိပျလြှငျပိုကောငျးပါသညျ။သစ်စာပွု ဆုတောငျးပါကိုယျပိုငျ အိမျအရိပျ ရရှိရပါလို၏လို့။ပုတီစိပျရနျ ဂုဏျတျောကားဗောဓိ ဗုဒ်ဓေါ မဟာဃရော။ပုတီးတဈလုံးဗောဓိ ဗုဒ်ဓေါ မဟာ ဆာယော။ ပုတီးတဈလုံးအနကျမွနျမာပွနျဗောဓိသစ်စာလေးပါးကိုသိမွငျတျောမူသောဗုဒ်ဓေါ မွတျစှာဘုရားသညျ မဟာဃရော သတ်တဝါတို့၏ ခိုနားရာ ကွီးကယျြ မွငျ့မွတျသော အိမျကွီးသဖှယျနှငျ့ လညျးတူတျောမူပါပေ၏။
ဗောဓိသစ်စာလေးပါးကို သိမွငျတျောမူသော ဗုဒ်ဓေါ မွတျစှာဘုရားသညျ မဟာဆာယော သတ်တဝါတို့၏ ခိုနားရာကွီးကယျြမွငျ့မွတျသော အ ရိပျကွီး သဖှယျနှငျ့လညျးတူတျောမူပါပေ၏အားလုံးကိုယျပိုငျအိမျ အရိပျရရှိကွပါစေ။
ညဘက် အိပ်မပျော်သူ များ အတွက် ချက်ချင်း အိပ်ပျော်စေ မည့် နည်း လမ်း (၆)ခု လုပ်ဆောင်ပုံ